Taariikhda My Butros » Sidee si ay u fududayso u Xanuun of weyni ka a
Last updated: Jan. 26 2021 | 2 min akhri
Sida Hadalku tagaa, isagoo guri u dhacaya adagtahay in lagu sameeyo. Haddii aad go'aan ku gaaray in la joojiyo xiriir qaada waxaa la wixii dareen ama dareenka, waxaa muhiim ah in la qiimeeyo qaabkaaga u diidniintayda si looga fogaado dhaawicid qof kale. Saxda ah dhaqanka fasax-up inta badan ku xiran tahay muddada aad adiga iyo lammaanahaaga ku jirtay xiriirka, sida ay halis xiriirka waa, iyo in dareenka ay yihiin labada dhinac.
Marka afjaridda xiriir kasta oo ay isku dayaan in ay sameeyaan fasalka iyo naxariis. Halkan waxa ku yaala dhawr talo oo waa in aad raacdo marka ay tahay waqti ay wax jebin, laakiin xasuuso xiriir kasta oo dareen-celin waa kala duwan, waxay rajayn aan la filayn sida jawaab.
Ha isku dayin inaad ka samaysan daar isagoo guri u dhacaya, haddii ay ma jiraan. Just sheegto qofkaas aad sababta xiriirka aan shaqayn oo aad u. Isaga ama iyada Quudinta furato ee ma ahan in aad, waa line Mei kuu keeni karaan sida aad hoos fudud daynin lammaanahaaga, laakiin waxay u badan tahay isagu ama iyadu arki doonaa iyada oo tan iyo xitaa laga yaabaa inay kor u sababaha sababaya ay aasnaa wax yeelo iyo xunuun more.
Ha darrooyin is daba joog wado
Haddii aad go'aansatay inay burburto leh qof, ma jirto sabab ay u jiidi bixi xiriir. Adigoo ka weyni ka, aad lamaanahaaga laga yaabaa in la sii kordhaya iyo aad u badan ku lifaaqan, wax hubaal ah inaadan rabin. Marka aad rabtid inaad xidhiidh, ha qofka kale la ogaado sida ugu dhaqsaha badan sida ugu haboon waa suurto gal ah si ay dareenkooda ma sii wadi qota dheeraynaya iyo horumarinta.
End Waxay wanaag
Waxa la soo dhaafay qofka la soo tuuray uu doonayo in uu maqlo waa II dhab ahaan doonayaan in ay sii wadaan in xidhiidhkeenii sida kaliya friendsî markii ay weli ku sugan tahay jacaylka. Waxaa ugu fiican ee dhamaan ka walaacsan in la siiyo qofka aad jabisay waqti qaar ka mid ah si aad u hesho waxaad ka badan ka hor isku dayayaan inay dhisaan saaxiibtinimo ah iyaga la. Sidoo kale, ha isku dayin inaad bedesho xiriir jacayl in ìfriends ah la xiriir benefitsî haddii aad u ogaato qofka kale weli dekadeeda dareen aad u. Tani waxay ku siin kartaa qof rajada kale been ah oo aad rabtid in dib loo daari lahaa ee romantic-marka, in xaqiiqadu, aadan sameyn. Tani waxay keeni kartaa inay wareer iyo dareenada xumaanta mustaqbalka fog.
Jabsada In Private
Ha u malaynina sababta keliya oo aad ku sugan tahay meel dadweynaha marka aad kor u jebin qof aad si guul leh qofkaas joojin doono xagga samaynta goobta a. Mararka qaarkood dareen xoogan oo aan loo eegin inta dadka kale ee ku xeeran yihiin la talaabsadeen karaan. By jabisay qof jooga meel dadweynaha aad gashan qof in xaaladda la filayo oo laga xishoodo on top of stress ee lagu soo tuuray. Tani waxa ay muujinaysaa ixtiraam la'aan ku tahay mid qayb ka. Jebinta waa wax ay tahay in la sameeyo meel gaar ah, si kasta oo dareenka lagu sheegi karaa iyada oo aan gabax.
Raac Rule ee Golden
Macna ma laha inta aad go'aansato inay burburto leh qof, waxaa ugu fiican in mar walba sharci ah oo dahab ah ku hay ñ ku sameeyo dadka kale sida aad iyaga u tahay in ay iska idiin. Haddii aad la soo tuuray, aad rabto in aad qofka kale si ay u muujiyaan daacadnimo iyo ixtiraam aad dhinaca. Maskaxda ku hay marka la qorshaynayo istaraatijiyad joojin ilaa aad. Ee ha ka yeelina lamaanahaada wax ka yar ee hab ka badan sida aad ka fili lahayd in la daaweeyaa, haddii xaaladda ayaa beddeli.
Ma Online Dating Choice wanaagsan?